Inona no ho hitanao any Amsterdam ao anatin'ny 3 andro | Vaovao momba ny dia
Amsterdam Io no renivohitr'i Holland, toerana iray izay mifantoka amin'ny zavatra mahaliana maro ho hita sy atao, rehefa dinihina tokoa, dia efa tsy nanana na inona na inona ary tsy mihoatra ny 17 taonjato nisy. Tanàna malaza amin'ny lakandrano izy, ny bisikiletany, ny barany ary ny trano fisotroany, ny tranombakoka ary, mazava ho azy, ny Distrika Jiro Mena.
Fa manolotra gastronomie manankarena ihany koa, labiera marobe, trano ho an'ny tsiro sy paosy rehetra ary, arakaraka ny fotoan'ny taona, hetsika ara-kolotsaina maro. Androany kosa hojerentsika inona no azontsika atao ao anatin'ny 3 andro any Amsterdam.
Amsterdam afaka telo andro
Ny telo andro dia matetika no fotoana lanin'ny olona amin'ny tanàna iray izay mitsidika voalohany amin'ny dia lehibe. Betsaka kokoa raha ny amin'ny fitsidihana an'i Eropa, raha avy any Amerika ianao, ary ny drafitrao dia ny hitsidika tanàna maro ao anatin'ny dimy ambin'ny folo na roapolo andro.
Noho izany, manomboka amin'ny andro 1. Misy carte postale tena mahazatra avy any Amsterdam izay misy ifandraisany amin'ireo trano avo sy tery ary misy rihana maro toa trano gingerbread ary mijery ny Danmark izy ireo. Ny zavatra mahazatra dia ny mijanona eo aloha, eo amin'ny seranan-tsambo, ary maka sary tsara, ary koa afaka mahita azy ireo ianao isaky ny mandeha sambo. Ireo trano ireo dia misy vongan-korontana eo an-tampontrano satria izany no nananganana ny fanaka, tamin'ny tady ary koa ny fitaratra. Betsaka kokoa amin'ireo trano kely miloko ireo ao amin'ny Nieuwebrugsteeg.
Ho an'ny iray fahitana tsara ny tanàna mila miakatra ianao, amin'izay ianao afaka miakatra any an-tampon'ny Fiangonana taloha izay eo akaikin'ny Distrikan'ny Jiro Mena ary avy aiza no ahitanao tsara ny tanàna taloha. Ny fiangonana dia amin'ny fomba Gothic ary hatramin'ny 1213 no trano tranainy indrindra eto an-tanàna. Maimaimpoana ny fidirana raha manana ny karatra fihenam-bidy fizahan-tany ianao, iAmsterdam City Card. Raha tsy izany dia 10 euro no aloa. Misokatra andro fiasana manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 6 hariva.
Teboka iray hafa tsara azo avy amin'ny Cafe Blue Amsterdam, avy any amin'ny foibe fiantsenana Kalvertoren. Ao amin'ny rihana fahatelo izy io, miafina tokoa, ary manana menio sandwich sy burger tsotra.
Satria eo amin'ny faritra ianao dia tsy maintsy mandeha mamaky ireo arabe taloha ireo ary mijery ny kianja katedraly. Eto no misy ny Fiangonana vaovao, ny tsangambaton'ny firenena ary ny lapan'ny mpanjaka.Misy koa ny Tranombakok'i Madame Tussauds ary ny ivon-toeram-pivarotana lafo vidy De Bijenkorf. Ny làlam-barotra lehibe, ny Kalverstraat ary ny Nieuwendijk, dia mifandray amin'ny afovoan-tanàna ary mahaforona fivezivezena mahafinaritra. Ny alakamisy, raha hanamarihana, ny fivarotana ao an-tanàna dia mihidy rehefa afaka ny 6 hariva
Raha reraky ny mandeha ianao ary te hiala sasatra eny ivelany dia afaka manararaotra ary mandeha Begijnhof Garden. Manomboka amin'ny vanim-potoana antenantenany izy io ary eo akaikin'ny kianja Spui, miaraka amin'ireo kafe sy fivarotana maro. Ny zaridaina dia mitokana ary voahodidin'ny trano tsy miankina izay namboarina hipetrahan'ny vehivavy mpivavaka. Ka tokony ho mangina sy manaja ny fitsidihana.
El Tsenan'ny voninkazo Toerana malaza be any Amsterdam izy io, ny toerana tsara indrindra maka sary tulip, ohatra, saingy tsy maintsy fantatrao fa tsy mendrika ny hijanona ela izany. Raha ny tokony ho izy dia mihodina ary mitodiha mankany Munt Tower, ilay toerana nanefena ny vola madinika teo aloha. Nopotehin'ny afo tamin'ny Moyen Age izy io saingy namboarina indray. Tsy lavitra dia lavitra ny Kianja Rembrandt, izay azonao ihodinana manaraka ny Reguliersbreestraat.
Handalo sinema tena mahafinaritra ianao, ny Teatra Tuschinski, mandra-pahatongany any amin'ny kianja. Ity misy sarivongana iray miorina amin'ny sanganasan'ny artista, The Night Watchman, ary manodidina ny kafe sy fivarotana kely maromaro. Amin'izao fotoana izao, tsapanao ve ny manome a mitaingina lakandrano amin'ireo lakandrano? Tsy maninona ny vanim-potoana amin'ny taona dia misy ny fitsangatsanganana ary be ny tolotra. Eto dia azonao atao ny manararaotra ny karatra iAmsterdam, fa kosa ny mitaingina sambo lehibe kokoa. Raha mila zavatra akaiky kokoa ianao dia mora ny sambo kely kokoa ho anao izay tsy misy fihenam-bidy amin'ny karatra.
Andro 2 any Amsterdam. Fantatra ny andro voalohany, fantatro, fa noho ny tanàna tsy dia lehibe sy ny faniriana hahafantatra maro, dia azo atao izany. Amin'ny andro faharoa dia mendrika izany manofa bisikileta ary mila mailaka ianao satria be ny fivezivezena. Ny fitsipika fototra dia ny mivezivezy eo ankavanana ary mampitandrina amin'ny tanana izay lalana halehantsika rehefa mihodina isika. Amin'ny bisikileta dia afaka mahatratra tsena malaza iray hafa ianao, ny Tsenan'i Albert Cuypstraat, dia malaza amin'ny mponin'i Amsterdam ny tenany.
Saingy misy ny zava-drehetra, sakafo, fahatsiarovana ary sakafo mahazatra amin'ny karazany rehetra. Sakafo maivana tsara dia ny Goudsche Stroowafels, waffle manify misy karamela. Ratsy kokoa noho izany ny hafa. indray amin'ny bisikileta azonao aleha Museumplein, faritry ny tranombakoka kilasika. Raha tianao izy ireo, mazava ho azy, misy ny Van Gogh Museum sy ny Rijksmuseum. Na dia tsy tianao aza ny tranombakoka, ireo roa ireo no be mpitsidika indrindra sy be mpitia indrindra. Tandremo fa tokony ho tapaka mialoha ny fitsidihana satria maro ny olona. Fomba iray hafa hanararaotana ny karatra iAmsterdam.
Vondelpark io no valan-javaboary lehibe indrindra eto an-tanàna ary eo afovoany. Mila mandehandeha etsy sy eroa ianao afaka manao izany amin'ny bisikileta satria misy toerana malalaka. Ka raha nividy sakafo eny an-tsena ianao ary tsy niditra tao amin'ny tranombakoka eto dia afaka mijanona amin'ny sakafo atoandro. Angamba tsy tianao ny tranombakoka fa tianao ny soavaly? Avy eo mitsangatsangana manodidina ny Sekolin'i Holland Equestrian sy tranombakoka.
Izy io dia sekoly taloha be izay misokatra sy ao afaka mandray kilasy ianao na mandeha na mankafy fihetsiketsehana amin'ireo mpitaingin-tsoavaly raha mankafy dite misy mofomamy ianao. ny serivisy diteNy traikefa iray manontolo dia mitentina 25 euro eo ho eo isaky ny olona fa tokony hamandrika ihany koa ianao. Raha tsy liana amin'ity toerana ity ianao ary mbola noana na efa tonga ny tolakandro ary tonga ny fotoana famoahana kaloria indray, ny safidy dia ny Efitrano fisakafoanana, habaka midadasika be eny amin'ny arabe Bellamyplein ary manolotra sakafo erak'izao tontolo izao.
Afaka mandany ny alina ao isika Oud - faritra Andrefana izay toerana iarahan'ny mponina eo an-toerana. Mazava ho azy, ny matory aloha dia mbola manana iray andro sisa isika. ny andro faha-3 ao Amsterdam Tokony hanomboka aloha izy io fa miankina amin'ny fotoana tokony hialanao ny zavatra ataonao. Amin'ny andro farany dia tsy dia manao zavatra firy aho, angamba mihoatra ny zava-drehetra miala sasatra, miverina amin'ny toerana tiako, mandeha kely kokoa ...
Mijanona ao amin'ny fantsona foana ny toerana: ny zoo, tranom-bakoka Science NEMO, sampana Hermitage Museum, Heineken Experience na, somary kely kokoa, ny labiera miasa ao ambanin'ny fikosoham-bary tranainy lehibe ao amin'ny Funenkade. Azonao atao ny mahita ny fomba fanamboarana labiera, hahafantaranao ny fikosoham-bolo sy ny tsiro tamin'ny taonjato faha-3. Tsy maintsy mividy ny tapakila ianao amin'io andro io ihany (Zoma, Sabotsy ary Alahady amin'ny 30 hariva). Raha mahaliana anao dia tsy maintsy maika ianao satria vondrona tsy misy olona mihoatra ny 20 ihany no miditra.
Farany, raha miala amin'ny Amsterdam ianao amin'ny alina dia afaka manararaotra sy miampita amin'ny lafin'ny tanàna amin'ny sambo hankafy ny sakafo atoandro atoandro Point Panoramic A'DAM. Miala isaky ny 10 minitra avy eo amin'ny Central Station ny sambo. Ary voila, tapitra ny telo andro tao Amsterdam. Ny fividianana ny karatra fizahantany dia safidy iray miankina amin'ny toerana firy ho hitanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Amsterdam » Inona no ho hitanao any Amsterdam afaka 3 andro
Inona no ho hita any Sri Lanka